Buy Lishou Coffee in ရန်ကုန် (7,500 Ks) on ipivi
Lishou အဆီကျကော်ဖီ ~~~ 7500ks (လက်ဟောင်း)
☕️ဝိတ်အရမ်းကျလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ Lishou coffee လေးပြန်ရောက်ပါပြီနော်!!!
☕️အားပေးသူအရမ်းများလို့ in stock အများကြီး ထားထားပါတယ်ရှင့်!!!
☕️တစ်ရက် ၁ထုတ်ကို အစာစားပြီး သောက်ပေးရုံပါပဲနော် !!!
☕️ကော်ဖီအရသာအတိုင်းလေးမို့ အလွယ်တကူသောက်ရုံနဲ့ ၁ပတ်ကို ၆ပေါင် ၇ပေါင်က အသာလေးကျစေမှာပါနော် !!!
☕️ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိတဲ့အပြင် ရင်တုန် မူးမော်တာတွေနဲ့ အစာစားချင်စိတ်မရှိတာတွေလည်း မခံစားရပါဘူးနော်
တစ်ဘူးမှာ ၁၅ ထုပ်ပါပါတယ်ရှင်
❌❌ဆီးချိုရောဂါရှင်များနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေတော့ သောက်လို့မရပါဘူးရှင့်❌❌
ဈေးနှုန်းကလည်းချိုသာပြီး အရည်သွေးကလည်းအထူးကောင်းမွန်ပါတယ်ရှင့် ဈေးကြီးမှာလည်းမပူနဲ့နော် 7500ks ထဲပါရှင့်
တခြားမြို့များအတွက်ပစ္စည်းများကို အိမ်အရောက် Delivery ဂိတ်များဖြင့် အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ရှင့် ပစ္စည်းရောက်မှငွေရှင်းရမှာပါရှင့် Delivery မရောက်သော မြို့များကိုလည်း ငွေလွှဲဝင်သည့် ညနေကားဖြင့် မြန်ဆန်တိကျစွာ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်​
ဝယ်ယူအားပေးသူ customers များအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်